Dadweynaha oo ka go’an tahay la dagaallanka al-Shabaab
Dhallinyaro Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Aadan Yabaal ee Gobalka Shabeellaha Dhexe ayaa billaabeen inay beegsadaan kana hortagaan kooxda dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab iyagoo sheegay in aysan u dul-qaadan doonin dhibaatooyinka ay kooxda ku hayso dadkooda.
Dhalinyaradaan ayaa is abaabulay ka dib markii argagixisada al-Shabaab ay sii laba jibaareen tacadiyada ay u gaysanayaan bulshada ku nool degmadaasi oo ay ka mid tahay dhac, dil iyo afduub ay kula kacayaan dadka Soomaaliyeed ee aan wax galabsan.
Qaar ka mid ah dhalinyaradaan oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in aysan u dul qaadanayn in maalin kasta ay dadkooda dhibaato u gaystaan maleeshiyaadkaan arxanka daran ee al-Shabaab. Sidoo kale masuuliyiin ka tirsan maamulka Gobalka Shabeellaha Dhexe oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa iyana sheegay in ay ka war haayaan dhalinyaradaasi is abaabulay, haatanna ay qorshaynayaan in ciidamo ka tirsan dowladda ay gaaraan degmadaasi Aadan Yabaal.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa haatan sii xoojiyay howlgalada ka dhanka ah maleeshiyaadka nabad-diidka al-Shabaab, iyagoo khasaaro badan gaarsiiyay argagixisada al-Shabaab.